The ndụ dealer egwuregwu na-ewu ewu n'oge dị ka ndị a na-enye a ezigbo cha cha ahụmahụ ka egwuregwu na-akpọ si nkasi obi ha n'ebe obibi ha na mobile ma ọ bụ nelu ihuenyo. NetEnt ulo oru ya ndụ dealer egwuregwu 2013. Ọ na-eji kamera na uzu iyi ndụ mmadụ na-ere ahịa bụ ndị na-anọdụ na nka ike ezigbo ala dabeere cha cha. Live VIP Blackjack awade elu table ókè Player nke-eme ka ọ ukwuu na-akwụghachi ụgwọ kwa.
Banyere Developer nke Live VIP Blackjack
NetEnt e hiwere na 1996 site a ma ama na ala dabeere cha cha na anọwo na-enye a dịgasị iche iche nke cha cha egwuregwu na software dị iche iche online casinos n'ụwa. The ụlọ ọrụ bụ ma ama maka na-emepe emepe elu àgwà egwuregwu na-abịa na ndị magburu onwe ndịna-emeputa na ụda. The VIP Mobile Blackjack Game na-a ndụ dealer game kere ha.
The VIP Mobile Blackjack Game site NetEnt awade table ókè na-ụzọ elu karịa ọtụtụ n'ime ndị ọzọ VIP utu aha dị site ọzọ mmepe. Live VIP Blackjack dị nnọọ mfe na-egbu egwuregwu. N'ihi nke egwuregwu na-adabere na kaadị na ị na-mesoo nakwa otú ọma ọfiọkde ị na-na egwuregwu iwu. Yana chioma, mkpa ka i nwere a atụmatụ na mkpa nkà na-chọrọ na-arụpụta. The VIP Mobile Blackjack Game na-egwuri na 8 mgbe kaadị redio. E nwere asaa oche dị na onye ọ bụla nke table-akpọ nke a VIP Mobile Blackjack Game. Otú ọ dị, tebụl ịnọgide na-emeghe 24/7, otú i nwere ike na-egwu egwuregwu a, mgbe ọ bụla ị chọrọ ma si n'ebe ọ bụla ị chọrọ. A chat igbe e nyere na n'elu aka nri akuku nke mere na ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike ikori na dealer na ibe Player na tebụl. N'okpuru chat igbe, ị ga-achọta ozi icon click on a na-ekpughe nzọ gị ego na itule. The egwuregwu na-ahapụ gị gaa na isi n'ọnụ ụlọ ogologo ebe ị nwere ike họrọ ihe na tebụl ị chọrọ igwu na. Ndị na-adị nhọrọ nke Guzosie, see, Gbasaa na ugboro abụọ dị dabere na kaadị ị na-mesoo.
Ụfọdụ n'ime atụmatụ nke VIP Mobile Blackjack Game bụ:
Maa mma ma ọma- zụrụ na-ere ahịa
Live Chat nhọrọ
Easy iji nsinammuo dabeere interface
Oké elu RTP
VIP Mobile Blackjack Game ndị iwu nke omenala blackjack, ma ọ bụrụ na ị na-na-egwuri blackjack tupu mgbe ahụ ị ga-enwe ike iso egwuregwu a mfe.